China Company News Factory - Cheap Company News nokutengesa, ekisipota
Post nguva: 02-01-2018
Vazhinji zvitoro paIndaneti kuti akatanga kupa achizvipa BALANCInG Scooters uye hoverboards zvakare. Sikuta Silent Kunounza musoro akatemerwa mutengo, chikuru unhu avhenyu-yepamutemo, Koowheel zvakasvibirira yemagetsi Scooters Export kuna Europe. Ruoko kana tsoka michina akamedura achibvumira kuti kumisa sikuta pakarepo pasina ...Read more »
Post nguva: 01-10-2018
KOOWHEEL Electric Longboard Maintenance uye Management
Post nguva: 12-27-2017
Post nguva: 12-11-2017
A mubvunzo vanhuwo iyo vanhu vanobvunza kuti, "Chii chakasiyana pakati yebhasikoro ngowani kuita mutserendende muchando nengowani?" Kunze pachena mutsauko nezviso, bhasikoro uye kuita mutserendende muchando nengowani chaizvoizvo vakuru dzakasiyana nenzira dzakawanda, uye uchida kuva nechokwadi kana iwe kutenga rworudyi mhando ngowani pamusoro Rhodesia ...Read more »
Post nguva: 11-29-2017
Post nguva: 10-12-2017
The Koowheel E1, 2 vhiri standup asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Self vakadengezera Electric sikuta angangodaro imwe duku uye munyoro uremu akarurama pachake transporter Motokari panyika. Zviri Koowheel Patent Innovative mufashoni inotonhorera design,-siyana headlamps uye anokosha muswe rambi; Pane zvakatungamirira D ...Read more »
Ita A Start itsva In Life With Koowheel hoverboard K7
Post nguva: 09-12-2017
nyaya All vaiona, wandingaitira dzatinogona kutaura ichi chete zvizivikanwe Koowheel idzva K7 Self vakadengezera sikuta. The KOOWHEEL K7 hoverboard 8.5inch hoverboard mavhiri guru kure mugwagwa Self vakadengezera sikuta zvirokwazvo vaiona pakati mune mumwe ose bedzi tsama nokuriita shoma kuti anouya Ul Cer ...Read more »
Post nguva: 08-29-2017
Kunyange zvazvo, imwe kwazvo nzira iri kutenga kubva zvechokwadi uye zvakanaka-vasina mutengesi kuti chakunodzikisira tarisiro upi kuitika yakadaro. nzira iyi hamungagoni paunotaura mharidzo uye regai kunetseka chaizvo ari maererano kune motokari dzinenge dzichiuya. The 2 Wheel vakadengezera sikuta kubudikidza Powerboard`s bhatiri ...Read more »
Post nguva: 08-15-2017
1. Kutanga mamiriro kuzvida BALANCInG sikuta 2. Musasiya pawaitengesa nepakati motokari. 3. K8 musika zvakanakira Tariro Mumakore achangopfuura, pamwe upgrading pamusoro norukosoro, itsva simba nemotokari - nengaidzo motokari dzakanga aidiwa mudzimba uye vatorwa vatengi ayo zvezvakatipoteredza ...Read more »
Koowheel 8.5inch Off-Road K7 anounza ruzivo nani kwauri
Post nguva: 08-01-2017
The KOOWHEEL 8.5inch Smart Chiyero sikuta K7 ndechimwe Newest hoverboard pamusoro pamusika. It ine siyanei michina kupfuura dzimwe hoverboards, kuubvumira kushandisa Motors zvikuru simba, kuti 8.5inch mavhiri ndedzokufungidzira ari tsvina uye uswa, kunyange zvazvo, kwete kuva Inflatable, iwe ...Read more »
Koowheel K8-dzaunosarudza Hoverboard
Post nguva: 07-21-2017
Sei Munoparadzireiko rako Leisure Time?
Post nguva: 07-18-2017
Sei Munoparadzireiko rako Weekend Time kana LeisureTime? Mumakore achangopfuura, vechidiki kuti nokutsvaka fashoni uye hunonakidza mararamiro, akatasva akachenjera pachiyero sikuta iri kunyanya kuva nevakawanda nhasi. Zvava nyore nzira kufamba. Izvi zvose zvakabatanidzwa nyaradzo uye reliabil ...Read more »
How kushandisa Koowheel nokuzvidzora BALANCInG bhodhi K4
Post nguva: 07-12-2017
.. "A: Ngatiende bhodhi, achizviendesa" "simba pamusoro / kure" "bhatani; The bhodhi iri kana kunzwa honk ruzha uye akatungamirira chakarurama chiedza iri 2. Danho iri bhodhi uye chengeta pachiyero Chekutanga akaisa rutsoka mumwe pamusoro rutsoka ikanyanya yozononokera kufambisa muviri pfungwa pamusoro rutsoka ikanyanya, uye Th ...Read more »
Munyika dzakawanda inotakurika yemagetsi Skateboards
Post nguva: 06-22-2017
In Europe uye United States nedzimwe nyika, ari hoverboard Scooters kana skateboard sikuta kwakakurumbira chaizvo, vana vanotanga kutamba skateboard sikuta pazera duku. Koowheel Michina kambani akasuma nhoroondo Four vhiri Electric Skateboard pamwe hunyambiri injini, kushandiswa pfupi ...Read more »
The feauture maviri vhiri ngwara sikuta k3
Post nguva: 06-13-2017
Two Wheel Electric sikuta ndiye wemagetsi, kuzvicheka-vakadengezera kukwanisa vanhu kushandisa chokufambisa motokari, ane motokari dzomumaguta, chiri motokari itsva kumboitika. Uyewo sevatsigiri kuyengerera puranga, nokuti munhu chokufambisa, patrol basa, nhandare indoor, gorofu engoro, mapurisa patrol, patrol exhibitio ...Read more »
The Self-vakadengezera sikuta K5 pfupi sumo
Post nguva: 05-27-2017
Product Tsananangudzo kuzvipira vakadengezera sikuta ane zvikamu zvitatu. The namasanhu maviri kudzora kurudyi mativi mumuviri sikuta wacho; mativi maviri anogona kushanda vakazvimiririra apo kutama, uye haangazvidembi kuvhiringidza mumwe. The sikuta ane mavhiri maviri; kufara pakati pamakumbo anomonereka haaiti ...Read more »
KOOWHEEL New zvakagadzirwa Electric sikuta L8
Post nguva: 05-08-2017
Koowheel Patent Innovative mufashoni zvakagadzirwa yemagetsi sikuta L8 To kuita mutserendende muchando kuva akasununguka, hapana mitemo munyika ino uye iwe chete munotinyima rwenyu fungidziro. Koowheel anogona kutora imi pose pose zvamunoda, hakuna muganhu. Tinofunga kuti zvizivikanwe anofanira embody pfungwa iyi, saka ...Read more »
Post nguva: 04-28-2017
Koowheel New akangwara BALANCInG sikuta K5 intrduction
Post nguva: 04-12-2017
Koowheel New yemagetsi kuzviriritira BALANCInG sikuta K5 kuuya! Ane zvikuru kusiyana ne dzose mbiri vhiri ngwara sikuta. About hoverboard ichi, redu R & D Team kupedza nguva yakawanda ari akatasva ruzivo, saka kuvandudzika kuti vanhu vanakidzwe nani mufaro mabhiza. Zvitatu zveefa zvivako. Kee ...Read more »
How kuchovha Koowheel Electric Skateboard?
Post nguva: 03-29-2017
Tsauranisa motokari unokupa kupfuura hwomutambarakede kufamba muzhizha
Post nguva: 03-16-2017
Tsauranisa motokari unokupa kupfuura wakasununguka zhizha pakufamba muoti makirisito muromo: yakakwirira tembiricha saregerereka kwazvo muzhizha, kufamba anova kutambudzwa. Koowheel nepakati motokari kukupa kupfuura hwomutambarakede kufamba muzhizha, akadzikama muzhizha! Summer, kufamba rava mhando kutambura, kuine zuva, t ...Read more »
Meet zvose zvenyu akatasva zvinodiwa-Koowheel Balance sikuta
Post nguva: 03-14-2017
Kwete kufanana Koowheel vakadengezera sikuta, yamunenge pamusoro mabhiza, zvinonakidza Pataidzokera rwokuparidza, unoda kutanga nayo? Unoda kuona akatasva mufaro muguta? Just ndikupei KOOWHEEL nepakati motokari, unogona takasununguka kufamba kuburikidza vatasvi kwenguva refu pasina kunetseka mukuru p ...Read more »
KOOWHEEL E-skateboard, Itai hwako upenyu kuva Cool
Post nguva: 03-01-2017
Wati une zvinokosha Chestkuva Tourism-Balance sikuta?
Post nguva: 02-22-2017
Two mavhiri vakadengezera motokari kutora iwe kutsime kwavaizoenda Kana chando yaenda, hunogona kutangwa kuva kure? Muchirimo tinoda kugara kure kuti chitubu kwavaizoenda. Maruva Wild anotumbuka muchirimo, kana vanhu vanoona mavara uye anonhuwira nemaruva, Pachatova kumisa, mundoona. Kudzidza akawana kuti t ...Read more »
Post nguva: 01-17-2017
KOOWHEEL kukupai yakasiyana ruzivo pamusoro E-sikuta kana E-skateboard arikuritasva
Post nguva: 01-09-2017
Pakufamba haasi pamusoro chitiviri kwaizoita, uye gare gare pamwe zvetsika mudhudhudhu uye zvemagetsi bhasikoro muchikwata ichi. Somunhu oga chokufambisa, nokukurumidza aripo, asi dambudziko kusvibiswa rava muzinda kupesana. KOOWHEEL maviri vhiri pepuranga K1 uye mana engoro yemagetsi skateboard Hove ...Read more »
Post nguva: 01-04-2017
Mune ano nokutsanya upenyu, vakawanda chena chipika, panze mabasa wakanaka kutombofara kwevhiki. Kouya mubvunzo: sei vanogona kuenda vakabvumirana kunzvimbo? KOOWHEEL Electric skateboard richava wakanakisisa kusarudza kuti mufashoni nevakomana avo nevasikana. Zvinonzi Zvinoreva kuti havasi hav ...Read more »
Regai akangwara nepakati sikuta kuenda newe paKrisimasi.
Post nguva: 12-08-2016
Nokuda kwegore rimwe nerimwe Christmas potse, Krisimasi yaizivikanwa China Spring Festival, nhasi, vakawanda vanhu vanogona kuita kushayiwa kwavo kuita uye kutenga zvipo zvavo kupfuura waunofarira nenzira inokwanisika zvikuru mutengo. Haugoni kumirira kuti kuedza? Mugore hwokumhanyamhanya upenyu ano, vakawanda chena-chipika kuenda uye L ...Read more »
Sei dzimwe nguva kure controller riri kunze kuti apo akatasva ari skateboard?
Post nguva: 11-28-2016
Mugore hwokumhanyamhanya upenyu hwemazuva ano, vakawanda chena-chipika uchida kuenda uye kusiya basa ose zuva achifara, pasi kuwedzera kuwandisa kwemotokari mamiriro ezvinhu, hapana nyaya worudzii chokufambisa achava zvingasanakira, apo tichifamba kana akatasva bhasikoro kutambisa imwe nguva, saka unofanira ngwara scoot ...Read more »
Electric kuzviremekedza BALANCInG sikuta kuti fashoni wemashiripiti ndizvo risingadzivisiki
Post nguva: 11-16-2016
koowheel yemagetsi kuzviremekedza vakadengezera sikuta, vanhu vari nguva dzose zvokusagona kuziva zvinhu zvitsva, saka, itsva Kuda mudziyo akaita anokwezvwa vanhu kufunga, achikwezva hukuru nhamba yevatengi kukwikwidza kutenga. Koowheel Self Kuwiriranisa Smart sikuta zvino rava pakufamba nyeredzi dziri mu ...Read more »
Post nguva: 11-03-2016
Kune vazhinji vakakurumbira hoverboard sikuta muchiso, sei Koowheel rave yavose sezvavakatarirwa sezvo pamusoro gumi akangwara sikuta muchiso kwemakore akawanda? Tapota vhura Google browser, uye ipapo achisecha mazvi "nepakati sikuta nokutengesa", vakawana kuti www.koowheel.com achazoburuka zita papeji yokutanga. In maviri -...Read more »
Vatambi kushandisa unyanzvi uye zveko, kupa nzira itsva uye mazano anoshanda kuti ano motokari matambudziko, kuumba inowirirana motokari, kunyange zvazvo pfungwa yakanaka, asi hazvigoni chinozoiswa, chii nguva inogona chinozoiswa achiri mubvunzo. Kana dambudziko motokari anogona ...Read more »